Imiphumela Yocwaningo: Ingabe Abathengisi Baphendula Kanjani Kubhubhane NaseLockdowns? | Martech Zone
Njengoba ukuvalwa kwehla futhi abasebenzi abaningi bebuyela emuva ehhovisi, besinesifiso sokuphenya ngezinselelo osomabhizinisi abancane ababhekane nazo ngenxa yobhadane lweCovid-19, lokho abekade bekwenza mayelana nokukhiya ukuze bathuthukise ibhizinisi labo, noma yikuphi ukukhushulwa abakwenzile , ubuchwepheshe ababusebenzise ngalesi sikhathi, nokuthi ziyini izinhlelo zabo nombono wabo ngekusasa.
Ithimba I-Tech.co kuhlolwe amabhizinisi amancane ayi-100 ngokuthi aphathe kanjani ngesikhathi sokukhiya phansi.
U-80% wabaninimabhizinisi abancane uthe iCovid-19 ibe ne- umthelela omubi ebhizinisini labo, kepha ama-55% azizwa ethembele kakhulu ngekusasa
I-100% yabaphenduli bebelokhu besebenzisa ukukhiya ukwakha ibhizinisi labo, iningi ligxile kakhulu ukumaketha, ukuxhumana namakhasimende, kanye nokwenza upskilling.
Ama-76% anakho onamakhono ngesikhathi sokuvalwa - nge-SEO, imithombo yezokuxhumana, ukufunda ulimi olusha, nokuhlaziywa kwedatha njengamakhono amasha ajwayelekile kakhulu okufundwa.
Amabhizinisi ahlolisisiwe ayevela enhlanganisweni yezimboni, kepha imikhakha ejwayelekile kwakuyizinsizakalo ze-B2B (28%), ubuhle, ezempilo & inhlalakahle (18%), ezokuthengisa (18%), isoftware / ubuchwepheshe (7%), nezokuvakasha ( 5%).
Izinselelo Zebhizinisi Abhekene Nazo
Izinselelo ezivame kakhulu emabhizinisini kwaba ukuthengisa okumbalwa (54%), kwalandelwa ukuthi kuhlelwe kabusha ukwethulwa komkhiqizo nemicimbi (54%), behluleka ukukhokha izindleko zabasebenzi nezamabhizinisi (18%), nokuthinta amathuba okutshala imali (18%).
Bonke abaphendulile okukhulunywe nabo bathe basebenzise isikhathi sabo ngaphansi kokuvalwa ngokukhiqizayo ukukhulisa ibhizinisi labo.
Ngokumangazayo, iningi seliqalile ukugxila kulokho abangakunikeza ku-inthanethi, nokwakha amasu abo wokumaketha edijithali, ngokwakha okuqukethwe okusha (88%) nokunikezwa okuku-inthanethi (60%), ukubamba noma ukuhambela imicimbi eku-inthanethi (60%), ukuxhuma amakhasimende (57%), kanye nokwakha upskilling (55%) njengezinto ezivame kakhulu ukwenziwa ngaphezu kokuvalwa.
Abanye bathi babenazo omuhle imiphumela ngenxa yeCovid-19, kufaka phakathi ukwanda kokuthengiswa kwe-inthanethi, ukuba nesikhathi esithe xaxa sokugxila kwezokumaketha, ukukhula ohlwini lwabo lwamakheli, ukufunda izinto ezintsha, ukwethulwa komkhiqizo omusha, nokwazi amakhasimende abo kangcono.
Amakhono amasha ajwayelekile kakhulu abantu abangathuthukisa ngawo ukufunda i-SEO (25%), imithombo yezokuxhumana (13%), ukufunda ulimi olusha (3.2%), amakhono edatha (3.2%), ne-PR (3.2%).
Ubuchwepheshe budlale indima ebaluleke kakhulu empumelelweni yebhizinisi ngalesi sikhathi. I-Zoom, i-WhatsApp, ne-imeyili kwakuyizindlela ezivame kakhulu ukuxhumana nabasebenzi, futhi ukumaketha imidiya yezokuxhumana, ukumaketha nge-imeyili, ukuhlangana kuwebhu, nokuba newebhusayithi eku-inthanethi noma isitolo kwakuyizindlela zobuchwepheshe ezizuzisa kakhulu. Iningi lisebenzise ukuvala ukuvuselela iwebhusayithi yabo, nge-60% isusa isiza sayo samanje futhi i-25% yakha entsha.
Iseluleko Samabhizinisi Amancane
Ngaphandle kobunzima obubhekane nabo, ama-90% aphendule ngokuthi abenombono omuhle noma omuhle ngekusasa lebhizinisi labo. Sacela abaphendulayo ukuthi banikeze izeluleko kwamanye amabhizinisi amancane ngalesi sikhathi. Lezi yizinto ezivame kakhulu okukhulunywe ngazo:
Zungeza futhi ubeke phambili
Ukubeka phambili okuhle kuwe nokwazi ukuthi yimiphi imisebenzi eshiwo abaphenduli abaningana:
Sebenzisa lesi sikhathi ukucija lokho osuvele ukwazi ukukwenza.
UJoseph Hagen kusuka ku-Streamline PR
Gxila emandleni akho, ungazami kakhulu. Yenza okuningi okukusebenzelayo ngokutholwa kwamakhasimende bese ugxila kulokho. Kithina, lokho bekungukukhangisa nge-imeyili futhi sikuphindaphinde kabili.
UDennis Vu weRingblaze
Thola ibhalansi phakathi kwezindleko zokusika nokutshala imali ngokuzayo. Bona lokhu njengethuba lokubandakanya, ukwakha ukwethembeka nokwethembeka.
USara Price ovela kwiCoaching Service Empeleni
Hlola Izinto Ezintsha & Agile
Abanye bathi manje yisikhathi esihle kakhulu sokushesha, futhi uthuthukise futhi uvivinye izinto ezintsha kubalaleli bakho, ikakhulukazi esikhathini sokungaqiniseki.
Ukushesha kuyisihluthulelo, izinto zihamba ngokushesha okukhulu ngaso sonke isikhathi ukuthi udinga ukubuka izindaba nezitayela, bese uphendula ngokushesha.
ULottie Boreham we-BOOST & Co
Thatha isinyathelo emuva futhi uhlele amasu, ukusebenzisa isikhathi sakho ngokuhlakanipha. Vivinya okunikezwayo okusha kusisekelo samakhasimende akho akhona, uwafake, bese wenza umzuliswano wokuqala ongaphelele.
UMichaela Thomas ovela kuThe Thomas Connection
Bheka amathuba ahlukile kulesi simo. Sisebenzisa ngokunenzuzo isikhathi sokuvala ngokunikeza izeluleko zokwakha zamahhala ezivela kozakwethu benkampani.
UKim Allcott we-Allcott Associates LLP
Finyelela Futhi Wazi Amakhasimende Akho
Ukubaluleka kokwazi nokuqonda amakhasimende akho nezidingo zawo kunqwabelene kakhulu ezelulekweni ezinikezwa ngamabhizinisi. Amabhizinisi angasebenzisa ukukhiya ukugxila impela ekwakheni amasu wokugcinwa kwamakhasimende.
Kungabonakala njengokuphikisana kodwa ikhiye phansi i-niche yakho, chaza ikhasimende lakho elifanele ngokuphelele ophelele kulo. Cabanga ngabo nenselelo yabo yamanje. Ukube ubusezicathulweni zabo ngabe ubufunani njengamanje? Ngemuva kwalokho qiniseka ukuthi umkhiqizo noma insiza yakho ikhuluma ngokusobala kuleso sixazululo. Senza iphutha lokukhuluma ngathi lapho sidinga ukukhuluma nangamakhasimende ethu. ” kusho
UKim-Adele Platts we-Executive Coaching
Ngokombono we-B2B, ngicabanga ukuthi kubalulekile ukugcina ukuxhumana namakhasimende akho futhi uwavumele aqonde ukuthi ukhona ukuwasiza nokuwaxhasa ngalesi sikhathi esiyinselele. Ngakho-ke noma ngabe lokho kukhiqiza okuqukethwe okuwusizo ukuhamba kule nkinga, noma ukuqinisa izinsizakalo zamakhasimende ukuthi zisize ukubhekana nakho, kubalulekile ukuvula inkhulumomphendvulwano kusenesikhathi nokuqhubeka nokukhuluma neklayenti lakho.
UJon Davis wenkampani yezobuchwepheshe iMedius
Khuluma futhi wenze ukuxhumana namakhasimende akho. Thola ukuthi bafuna wenzeni ukusiza isimo sabo. Sebenzisa lesi sikhathi ukudala okuqukethwe okulungele manje nekusasa njengoba lesi sikhathi sesikhathi singeke sibe unomphela.
ICalypso Rose yesitolo esiku-inthanethi, Indytute
Ezikhathini zokwehla komnotho, izinkampani ngokuvamile kufanele zisike. Imvamisa, yisabelomali sokukhangisa nesokukhangisa esinqunyiwe. Kodwa-ke, abaphenduli abaningi bakhombe ekubalulekeni okuqhubekayo kokuthola ukumaketha kwakho kulungile.
Abantu bavulekele kakhulu kunanini ngaphambili ukuba nezingxoxo eziku-inthanethi, basebenzise imithombo yezokuxhumana, futhi baxhumane nabantu abasha. Ukuthuthukisa iwebhusayithi enhle nephumelelayo kubaluleke kakhulu kunakuqala.
UJulia Ferrari, umklami weWebhu
Hlehla emuva uzama ukukhula njengamanje bese ucabanga ukuthi 'yiziphi izingxoxo engingaziqala manje ezingakhula zibe yingxoxo yamakhasimende engaba khona ezinyangeni eziyi-8-10? I-Lockdown yithuba elihle lokusebenza kumaphrojekthi wokukhangisa wesikhathi eside.
UJoe Binder we-ejensi yomkhiqizo ye-WOAW
Iwebhusayithi enhle iyisihluthulelo. Kwenze kube ngumkhiqizo wakho siqu. Khombisa ubufakazi obuvela kumakhasimende ukwakha ukwethembana futhi ukhombise ukuthi uyakwazi okwenzayo. Sebenzisa ubuchwepheshe (ingqungquthela yevidiyo nokwabelana kwesikrini) ukusebenzisana nokwethula kumakhasimende. Abezizwe bathola ukunethezeka ngokwenza ibhizinisi online. Khombisa ubuso bakho uphinde unikeze izixazululo ezinkingeni zabo. Uma ungenabo ubuchwepheshe noma udinga usizo endaweni ethile, thola umsizi obonakalayo. Sisebenzisa abasizi ukusiza ngokubhala ibhulogi, ukudala ihluzo, nokuphathwa kweCRM.
UChris Abrams we-Abrams Insurance Solutions
Amasu Okugcina Amakhasimende
Tags: i-lockdownsmarketingamasu marketingubhubhane